पोर्न स्टारका दुखद दिन ! पतिविरुद्ध ७२ लाख अमेरिकी डलर जितेकी विन्दु कसरी बनिन् पोर्न स्टार ?
| 2016-01-06 Published
निर्माण साप्ताहिक विशेष वार्ता
नेपाली पोर्न स्टारका रूपमा प्रचार गरिएकी पोखराकी युवती बिन्दु परियारको पक्षमा अमेरिकी अदालतले फैसला गर्दै उनको पूर्वश्रीमान् टम रान्डेल सेवेलबाट ७२ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति गराएको छ । बिन्दुलाई नेपालबाट अमेरिका पुर्‍याई जबरजस्त पोर्नस्टार बनाएको ठहर गर्दै उनको पूर्वश्रीमान् विरुद्ध अदालतले उक्त फैसला गरेपछि उनले आफ्नो व्यक्गित जीवन र आफुले भोगेका पिडाका दिनका बारेमा यसरी यस्तो बताइन्—
कति वर्ष टमले तपाईंमाथि हिंसा गर्‍यो ?
म माथि पूरा दुई वर्ष हिंसा भयो, जसका सबै कुरा म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । नारकीय जीवन भोग्न बाध्य भएँ म ।
तपाईंलाई आफूले कहिल्यै गलत गरें भन्ने भन्ने लागेको थियो कि ?
थियो, कसैप्रति धेरै विश्वास गर्नु हँदैन भन्ने लागेको थियो । यसैगरी नेपालमा बसेर अमेरिकाको सपना देख्नु गलत थियो भन्ने लाग्थ्यो । धेरै छन् यस्ता कुरा, जुन म भन्न पनि सक्दिनँ ।
नेपाली युवती अमेरिकामा गएर पोर्न स्टार भइन् भन्ने खबरचाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो ?
जब मैले केस फाइल गरेँ त्यसपछि उसले मलाई धम्क्याउँदै फोटो तथा भिडियो अपलोड गर्दो रहेछ, पछि एक दिन मिडियामार्फत नै मैले यो कुरा थाहा पाएँ । म पागलजस्ती भएँ । नेपालमा भएका मेरा बाआमाको इज्जत माटोमा मिल्यो भन्ने लाग्यो । अहिले त्यो क्षण सम्झन पनि चाहन्नँ ।
परिवार तथा आफन्तले के सोचे होलान् जस्तो लाग्यो, जब तपाईंको भिडियो भाइरल भयो ?
यो मान्छेले यसरी भिडियो अपलोड गर्ला भन्ने त कल्पना पनि गरेकी थिइनँ । भिडियोमा भनेझैं नगरौं त उसको डर थियो । कुटपिट अति नै गथ्र्यो । एक दिन किन यसरी भिडियो बनाएको भन्दा तैँले मलाई छोडिस् भने आफूलाई हेर्नका लागि बनाएको भनेको थियो । मेरो जीवनमा यति ठूलो घात गर्ला भन्ने त सोचेकै थिइनँ ।
तपाईंले परिवारलाई सोचेजस्तो सहयोग गर्न सक्नुभयो त ?
पहिलो पटक काम गर्दा १ लाख पठाउन सकें । पछिचाहिँ टमले मलाई नै पैसा दिन छाड्यो । मैले कमाएको सबै उसैले लिन्थ्यो ।
त्यसपछिका दिनहरूमा कसरी अमेरिकामा टिक्नुभयो ?
एक जना अमेरिकी नागरिकले रुँदै होटलमा बसेको देखेर सोध्यो, मैले आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाएपछि उसैको सहयोगमा कहिले सेल्टर त कहिले क्लबमा बस्छु । काम गरिरहेकी छु । नर्सिङ पढ्न पनि थालेकी छु ।
अहिलेचाहिँ तपाईंको परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
मैले मुद्दा जितेकोमा आमाबुबा खुसी हुनुहुन्छ । धैर्य गरेर बस, हाम्रो साथ कहिल्यै टुट्दैन भन्नुहुन्छ । मैले पनि बाँचुन्जेल न्यायका लागि लड्ने अठोट गरेकी छु ।
अबको तपाईंको योजना ?
काउन्सिलिङ, मेडिकेसन र अपलोड गरिएको भिडियो मेटाउन लाग्ने खर्च हो ७ दशमलव २५ मिलियन डलर ।
मैले कमाएको ३ करोड रुपैयाँ टमले नै खाइदियो । हामी दुईबीच एक जना मर्नुपर्छ भन्दै धम्की दिएको छ । म पनि सास रहुन्जेल लड्न तयार छु ।
नेपाल कहिले आउने ?
दसैंमा आउने योजना थियो सकिनँ । अहिले पढिरहेकी छु । केही पैसा जम्मा गरेर अनि नर्स बनेर मात्र नेपाल फर्कन्छु ।
(रेडियो कान्तिपुरका लागि कार्यक्रम प्रस्तोता सविना कार्कीले बिन्दु परियारसँग गरेको प्रत्यक्ष कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
यसरी नेपाली चेली खाडी, अरब र अमेरिकी देशमा बेचिन बाध्य पारिएका छन् भन्ने सन्दर्भका लागि यो सामग्री प्रस्तुत गरिएको हो, सम्पादक ।